नेपाल आज | दार्जिलिङका नेपाली भन्छन्, ‘हामीलाई विदेशी भन्छन्, के बंगाली अरु देशमा छैनन् ?’ (भिडियोसहित)
दार्जिलिङका नेपाली भन्छन्, ‘हामीलाई विदेशी भन्छन्, के बंगाली अरु देशमा छैनन् ?’ (भिडियोसहित)
आइतबार, ११ असार २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
► दार्जिलिङमा नेपालीमाथि अत्याचार ।
► माग राखेकै कारण बंगाल सरकारले नेताहरुको घर जलाउने, तोडफोड गर्दै छ ।
► इन्टरनेट काटियो, मोबाइलमा पनि बोल्न डराउँछन् जनता ।
► सिबिआईको अत्याचारले जनता त्रस्त ।
► बोल्यो भने गरिखान पनि दिदैन सरकारले ।
► गोर्खालीको घरमा भेटिएको खुकुरीलाई पनि हतियार भन्यो ममता बनर्जी सरकारले ।
पशुपतिनगरबाट बिहानको खाना खाएर निस्केपछि दार्जिलिङ पुग्दा आठ बजिसकेको थियो । लखतरान परेर हामी होटल खोज्दै थियौं । इलामको पशुपतिनगरबाट दार्जिलिङ सम्मको ३१ किलोमिटर यात्रामा हामीलाई १२ किलोमिटरमा सवारी साधनबाट यात्रा गर्ने अवसर मिल्यो । बाँकी यात्रा पैदल पार गरेका थियौं । ‘पहाडकी रानी’को उपमा पाएको दार्जिलिङ त्यसदिन आन्दोलनमा थियो । आम हड्तालका कारण सडक, गल्ली, चौक चकमन्न थिए ।
दार्जिलिङमा धेरैजसो नेपाली नै छन् । तर आफन्त कोही थिएनन् । बसोबासका लागि होटल खोज्न थाल्यौं । एक होटलले अर्को होटलका लागि सिफारिस गरिदिए, तर बास दिएनन् । दार्जिलिङमा प्रभाव भएका एक मित्रको नाम लिँदा त्यसले उल्टो हानी नै गर्यो ।
आफ्नै बलमा, धेरै अनुरोधमा एक होटलमा बसोबासको प्रबन्ध गर्यौं । एउटा होटल भित्र थोरै उज्यालो देखेपछि हामीले होटलको ढोका ढकढक्यायौं । रातको पहिलो प्रहर ढल्दै थियो । यसपटक भने हामी निकै नरम स्वरमा एक रातको लागि मात्र भनेर कोठा लिन सफल भयौं । होटलका म्यानेजर भन्दै थिए ‘अनिश्चितकालीन बन्दले जनजिबन प्रभावित भैरहेको छ । हामी हाम्रा पाहुनाहरुलाई कुनै सुबिधा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । फेरि स्वतन्त्र गोर्खाल्यान्ड राज्यको मागमा समर्थन जनाउदै होटल एसोसिएसन दार्जिलिङले सबै होटलहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेर जारी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको रहेछ । जे भए पनि त्यो रात खाना खाएर निदायौं ।
एका बिहानै दार्जिलिङलाई कुहिरोले ढपक्क ढाकेको थियो । हामी चियाको सुर्को लगाउने धुनमा चोकमा निस्कियौं । बाटोको दुबै छेउ मान्छेको भिडभाड बढिसकेको रहेछ । एक पर्यटक भन्दै थिए ‘सिलगुढीको बस त पक्कै लाग्छ होला प्रहरीले स्कर्टिङ मै भए पनि दुई चार गाडी चलाउने कुरा छ ।’ दाजिलिङ ठप्प थियो । नेपालमा जस्तै स साना चिया पसल फाटफुट खुलेको कुरा सुनिएको थियो । तर देखिएनन् । हरेक जस्तो वस्तु र सेवाको मूल्य बढेको थियो ।
चिया पसल खोज्दै जाँदा एउटा गल्लीमा एक वृद्धलाई भेटायौं । ‘चिया पसल कतै छैन बा ?’ उनले हामी तीनको अनुहार नजिकबाट नियाले । अनुहारमा शंका छरिएको देखिन्थ्यो । हामीले नेपाली भाषा बोले पनि उनलाई दार्जिलिङका मान्छे हैनन् भन्ने सजिलै पर्यो । उनले जवाफको सट्टा प्रश्न नै गरे । ‘आप कहाँ से आए हैं ?’ मलाई हिन्दी बोल्न खासै आउँदैन । नेपालीमै भनेँ, ‘हामी नेपालबाट आएका हौं ।’
यति भनेपछि बुढाले आफ्नी बुहारीलाई हाम्रो लागि चिया बनाउन भने । अनि उनले आफ्नो दार्जिलिङ जीवन सुनाउन सुरु गरे । ३२ बर्ष अघि दोलखा जिल्लाबाट रोजगारीको लागि दार्जिलिङ पुगेका रहेछन् उनी । त्यहीँ विवाह गरे । सन्तान त्यतै जन्मे । नातिनातिना पनि छन् अहिले । बुढाको एउटै गुनासो छ, ‘लौ म त पछि आएको रे । मेरो सन्तती त सबै यहि माटोमा जन्मेका होइनन् र ? यी बंगालीहरुले हामीलाई विदेशी भन्छन् । के बंगाली चाहिँ बंगलादेशमा छैनन् ?’
सडकका दुबै छेऊमा बाक्लो सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए । सेनाका गाडी साइरन बजाउँदै ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए । दार्जिलिङको हिमालय दर्पण दैनिक किन्ने क्रममा साहुजीलाई सोध्यौं, ‘दार्जिलिङमा कुनै अप्रिय घटना हुँदै छ हो ?’ साहुजीले पनि बुढा बाकै जस्तो प्रश्न तेस्र्याए । ‘तपाईहरु कहाँबाट आउनु भएको हो र ?’
हामीले भन्यौं ‘नेपालबाट ।’
साहुजीले भने, ‘यहाँको स्थिति नबुझी आउनु भएछ । गल्ति गर्नुभयो ।’
मित्र माधवजीले भन्नुभयो, ‘हामी पत्रकार हौं । रिपोर्टीङ गर्न आएका हौं ।’
अनि उनले भने, ‘जोगिएर काम गर्नुहोला । बोल्ने कुरा पनि सोचविचार गरेर बोल्नु होला । पश्चिम बंगाल सरकारले जताततै सिआइडी परिचालन गरेको छ ।’
पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङ आन्दोलनमा नेपालबाट भाडाका मान्छे ल्याएको, नेपालले आन्दोलनलाई सहयोग गरेको, नेपालबाट हतियार ल्याएको लगायतको आरोप लगाएको छ । उनले भने, ‘प्रहरीले तपाईंहरुलाई प्रमाणको रुपमा पक्राउ गर्न पनि सक्छ । त्यसैले हरताल अघि नै दार्जिलिङ घुम्न आएको, अलपत्र परेको , सिलगुडी पठाइदिन आग्रह गर्नूस । सकेसम्म नेपालबाट आएको र पत्रकार भन्दै नभन्नुस यहाँको स्थिति त्यत्ती राम्रो छैन ।’
दिउँसो सडकको एउटा किनारामा सुरक्षा फौज र अर्को किनारामा आन्दोलनकारी जम्मा भए । अघिल्लो रात गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष बिमल गुरुङको घरमा प्रहरीले छापा मारेर खुकुरी , खुडा लगायतका हातहतियार बरामद गरेको थियो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरुलाई वारेन्ट जारी गरेको समाचारले नेपालीहरुलाई आक्रोसित बनाइरहेको थियो । मैले मेरो छेउमा रहेका सेनाका भूपू दाईसँग विमल गुरुङले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जोड दिनु पर्ने, गुरुङ कै घरमा हतियार भेटिँदा आन्दोलन कमजोर हुन सक्ने धारणा राखेँ । उनले मलाई सोधिहाले, ‘तपाई बंगाली हो कि बेनर्जीको जुठो खाएर आएको हो ? गोर्खालीको घरमा खुकुरी हुँदैन ? त्यही खुकुरीलाई सरकारले हातहतियार मानेको छ । हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति नबुझ्ने बंगालीसँग एक मिनेट पनि बस्न सक्दैनौं ।
मध्याह्नको १२ बजेको हुनुपर्छ । विद्यार्थीहरुको समूह जम्मा हुँदै थियो । गोर्खाल्यान्ड लेखिएका प्लेकार्डहरु बन्दै थिए । तयारी हेर्दा विद्यार्थीहरु शान्तिपूर्ण गोर्खाल्यान्डलाई ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम जस्तो लाग्थ्यो । हामीले केही विद्यार्थीहरुसँंग कुरा गर्यौं । प्रायः सबै विद्यार्थी भन्दै थिए– भारतीय संबिधानमा नै आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने निश्चित गरिएको छ । हामी हाम्रो मातृभाषा नेपालीमा पढ्छौं । हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हिन्दी पढ्नै पर्यो । अन्तराष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी पढ्छौँ त्यो बंगाली भाषा किन पढ्नु न हाम्रो त्यससँंग कुनै साइनो छ ? न त्यो पढेर हामिलाई कुनै फाइदा नै छ । त्यसैले हामी बालबालिकाहरु पनि हामीमाथी जबरजस्ति बंगाली भाषा लाद्न खोजिएको बिरोधमा सडकमा आउनुपरेको हो ।
एक रातको प्रतिबद्धता गरेर होटल लिएका हामीलाई केहि दिन होटल बसाइ लम्ब्याउनु थियो । म्यानेजरले एकरातको सहमति पनि होटल मालिकको अनुमतिमा गरेका थिए । अब हामीले होटल मालिकलाई भेट्न पर्ने भयो । हामीलाई बस्ने खाने प्रबन्ध मिलाइदिने आश्वासन दिएका नेपालका एक व्यवसायीलाई दार्जिलिङमा चरो मुसो कसैले चिन्दो रहेनछ । ‘अच्छा मान्छे’को फेला परेको अनुभूति पनि भयो ।
बसाइ त लम्ब्याउनै पर्ने थियो । होटल मेनेजरले मालिकसँग भेट गराइदियो । साहुजीले नेपाली भाषी हुनुको नाताले उनले हामीमाथि सहिष्णु व्यवहार नै दर्शाए । उनले भने, ‘भाइहरु पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ । नेपालका पत्रकारले गोर्खालीको आन्दोलनलाई समर्थन नै गर्छन् । यसकारण तपाईहरु बस्नुहोस् । ’
उनले आफ्नो बारेमा पनि जानकारी दिए । उनका माथिल्लो तीन पुस्ता ओखलढुंगाबाट त्यहाँ पुगेको रहेछ । उनी चाहीँ भारतीय सेनाको जागिर निवृत्त भएपछि होटल चलाएर बसेका रहेछन् । दार्जिलिङ भारतमा पनि पर्यटन गन्तव्यको स्थल हो । पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङबाट ठूलो रकम लैजान्छ । तर दार्जिलिङ अंग्रेजले छाड्दा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । विकासमा भारतको अरु क्षेत्र भन्दा दार्जिलिङ सुस्त छ । बंगालीहरुको शासनमा बस्नु परेकोले गोर्खालीहरु असन्तुष्ट छन् ।
गर्मीमा पनि सितल हुने दार्जिलिङ अहिले ठप्प छ । उनीजस्ता होटल सञ्चालकले दैनिक ३ देखि ५ लाखको व्यापार गुमाउँछन् । उनीहरुले अहिलेको आन्दोलनलाई अन्तिम मानेका छन् ।